Khubaro cilmi baareyaal ah ayaa ku guuleystay qalliin ay ku diyaariyeen digaag si caadi ah u dhali kara ukumo ay ku jirto daawo loogu talo galay kahortagga noocyo ka mid ah cudurka Kansarka iyo cudurka ku dhaca kalagoysyada ee afka qalaad lagu yiraahdo arthritis. | Biyoguurenews.com
Home Wararka Khubaro cilmi baareyaal ah ayaa ku guuleystay qalliin ay ku diyaariyeen digaag...
Khubaro cilmi baareyaal ah ayaa ku guuleystay qalliin ay ku diyaariyeen digaag si caadi ah u dhali kara ukumo ay ku jirto daawo loogu talo galay kahortagga noocyo ka mid ah cudurka Kansarka iyo cudurka ku dhaca kalagoysyada ee afka qalaad lagu yiraahdo arthritis.
Dawooyinkan ayaa markii taranka digaagga lagu dhex milo waxay 100 jibaar ka raqiisan yihiin marka si caadi ah loo soo warshadeeyo.
Cilmi baareyaasha ayaa aaminsan in wakhti ka dib la gaari doono heer dawooyinkaas suuqa loogu iibgeeyo.
Digaagga howshan lagu fuliyo ayaan wax dhibaato ama xanuun ah la kulmin, sida ay sheegeyso Dr Lissa Herron oo ka tirsan shirkadda Roslin Technologies ee magaalada Edinburgh.
“Waxay ku noolyihiin xarun baaxad leh. Waxaa la siiyaa raashin iyo biyo, waxaa maalin walba xannaaneeya farsamo yaqaanno si wanaagsan u tababaran, waxayna ku jiraan nolol fiican”.
“Marba haddii ay digaagaddu ogtahay iney si caadi ah ukun u dhaleyso, howshan wax saameyn ah kuma yeelaneyso caafimaadkeeda”.
Seynisyahanno ayaa horay u sheegay in haddii qalliinno lagu sameeyo xubnaha taranka ee ariga, bakeylaha iyo digaagga loo isticmaali karo in lagu soo saaro dawooyin nafaqo oo lagu dhex milayo caanahooda ama ukuntooda.
Cilmi baareyaashan ayaa sheegaya in horumarka ay hadda sameeyeen uu yahay mid ka wax tar badan tallaabooyinkii horay loo qaaday iyo isku dayadii lagu doonayay in dawooyinka loogu beero xubnaha taranka ee xayawaannadan.
“Wax soo saarka laga sameynayo digaagga wuxuu meel walba dadka u sahlayaa iney ku helaan kharash 10 ilaa 100 jibaar ka yar qiimaha uu joogo wax soo saarka warshadaha. Marka waxaan ku rajo weynahay in ugu yaraan aan 10 jibaar ka raqiisanaan doonno qiimaha dawooyinka warshadaha” ayey tiri Dr Herron.
Ukumaha ay ku jirto dawada ka hor tageysa Kansarka ayaa hadda loogu tala galay in lagu sameeyo cilmi baaris oo qura, hase ahaatee looguma tala galin in lagu iibiyo suuqyada.
Previous articleSida ay xiisadda Venezuela isugu baddali karto dagaal caalami ah
Next articleMadaxweynaha Zimbabwe oo amar ku bixiyay in lasoo xiro saraakiil ka tirsan ciidamada dalkaasi